Nyocha banyere mobiles, smartwatches, tablet, ngwa, ngwa, egwuregwu, ... | Gam akporo (Peeji nke 3)
Ngwa kacha mma maka egwu na ndezi ederede
Nhọrọ nke kacha mma ngwa maka edezi music na ịcha songs gị gam akporo mobile ma ọ bụ mbadamba. Bụrụ ezigbo DJ
ZTE na-ekwupụta mmemme ọhụụ nke Nougat maka AXON 7
ZTE Axon 7 sonyekwara na mmemme beta maka gam akporo 7.0 Nougat site na ịkọwapụta ọbịbịa ya maka ndị ọrụ US.
Nyocha vidiyo zuru ezu na Spanish nke Samsung Galaxy A5 2016, ekwentị nke emere na aluminom na iko dị ọkụ na nke na-erughị euro 300
Anyị anwalela Ulefone Tiger ọhụrụ, smartphone nwere nnukwu atụmatụ yana ọnụ ala dị oke ala. Nke ahụ ziri ezi na ndị a bụ echiche anyị
Huawei Mate 9, nke a bụ eze ọhụrụ nke ahịa phablet
Nyocha vidiyo zuru ezu na Spanish nke Huawei Mate 9, ekwentị nke juru anyị anya site na ogo ya na igwefoto dị ike na sistemụ lens abụọ
Yootak Chic, nkwado magnetik maka mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba ị ga-ahụ n'anya
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke Yootak Chic, echiche ọhụrụ nke ihe eji ụgbọ ala magnet na-abịa ịgbanwe ahịa ndị na-ejide ekwentị.
Otu esi agbanwe igwe onyonyo ochie anyị ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ maka erughị euro 90
Taa, maka ihe na-erughị Euro 90 nke ọnụahịa, m ga-akọwa ụzọ kachasị mma iji gbanwee telivishọn ochie anyị ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ gam akporo.
Sudio Regent, ekweisi-nke kachasị elu maka ekwe ntị 129 euro, nweta ha maka euro 109 maka Androidsis !!
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke Sudio Regent, a ekweisi na purest Beats ịke na wireless technology na nnukwu obodo kwụụrụ.
Mmetụta mbụ nke LG X Power, ọnụ ya na batrị dị ike
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ ala njedebe na nnukwu batrị, gaa maka echiche mbụ nke LG X Power, ebe ọ gaghị emechu gị ihu.
Nomu S20, nyochaa na Spanish
Anyị na-enyocha Nomu S20, ọnụ ọgụgụ ọhụrụ nke Nomu nke pụtara maka ịbụ ekwentị na-eguzogide ọgwụ na ọdịda, yana asambodo IP68 na ọnụahịa dị egwu.
Nyochaa na Spanish nke Xiaomi Redmi Rịba ama 4. A nnukwu gam akporo ọnụ na-erughị 200 euro
N'ebe a, anyị ga-ahapụ gị nyocha zuru oke nke Xiaomi Redmi Rịba ama 4 na Spanish. Nyochaa nke anyị na-egosi gị ihe niile, ihe niile na ihe niile.
Netatmo ihu igwe, nyocha na uche
Anyị nwalere ụlọ ọrụ ihu igwe Netatmo zuru ezu, ngwaọrụ nke ga - enyere gị aka idozi ụlọ gị n'ụzọ akụ na ụba site na ịchịkwa ọtụtụ data
3 nnukwu ngwa ọhụrụ sitere na Adobe maka ịmepụta, ịmepụta na ịbịaru
Adobe etinyela batrị ọnụ ma gosipụta anyị na ọ maara otu esi eme sọftụwia dị egwu dịka Sketch, Comp CC na Fix
Huawei P9 Lite, nyocha nke eze ọhụrụ nke etiti
Nyocha na Spanish nke Huawei P9 Lite, ekwentị zuru oke nke ghọrọ nhọrọ kacha mma ịtụle n'etiti etiti mpaghara ahụ.
Nyochaa TV Igbe TX3 Pro ma ọ bụ otu esi atụgharị TV gị na TV gam akporo maka naanị Euro 30
Taa na nyocha TV TV TX3 Pro a, anyị na-enyocha ngwaọrụ gam akporo Tv na gam akporo M nke na-efu 30 euro.
RHA DACAMP L1, CL1 na CL750, onye nrụpụta ahụ juru anyị anya site n'igosi DAC mbụ na ampilifaya enwere ike ibugharị maka smartphones na ahịa
RHA DACAMP L1, RHA CL1 na CL750 bụ azịza ọhụrụ nke RHA gosipụtara, na-eleghara DACAMP anya dị ka DAC obere mbugharị na ampilifaya
Android 7.1 Dev Preview dị ugbu a maka Nexus 6P, 5X na Pixel C
Gam akporo 7.1 Dev Preview dị ugbu a maka Nexus 6P, 5X na Pixel C nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụụ dịka ngwa mkpịrịsị ụzọ, akara ngosi gbara gburugburu ...
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, ihe ngosi ọkụ maka ama gị ma ọ bụ mbadamba gị
Anyị nwalere SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, ihe ngosi ọkụ maka ekwentị gam akporo gị ma ọ bụ mbadamba nke na-enye gị ohere ịgbasa ebe nchekwa nke ngwaọrụ gị
Mmetụta mbụ nke Wileyfox Spark X
Anyị nwere Wileyfox Spark X, ekwentị na CyanogenMod 13 nke na-enye nnukwu ahụmịhe gam akporo na ọnụ ala dị ala.
Netatmo Nnọọ, anyị na-enyocha onyunyo onyunyo nke na-amata ihu gị
Nnyocha nke igwefoto nnabata Netatmo, sistemu onyunyo vidiyo nke ga - enyere gị aka inyocha ihe niile na - eme n'ụlọ site na ekwentị gam akporo gị.
Ihe ngosi mbu na Amazon Fire HD 8
Amazon Fire HD 8 bụ mbadamba nkume zuru oke maka ezinụlọ na nkọwa ya na ọnụahịa gosipụtara ya. Ọ bụrụ na ị na-achọ imegharị ụdịrị ngwaọrụ a, ọ zuru oke
WTF?! Smart Akwụkwọ mmado, anyị na-anwale nrapado akwụkwọ mmado na-enye gị ohere ịrapara mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba na ebe ọ bụla
Anyị nyochaa WTF?! Akwụkwọ mmado Smart, akwụkwọ mmado mara mma nke na-enye gị ohere itinye ekwentị gị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihu ọ bụla na-enweghị nsogbu na n'enweghị nsogbu.
Nyocha nke Huawei Nova Plus, ngwaọrụ nke ga-eju gị anya
Huawei juru ya anya site n'igosi ezinụlọ Nova ọhụrụ n'oge ngosi ya na mbipụta ikpeazụ nke IFA na Berlin….
Meizu Pro 6, nyocha ohuru nke ndi Asia meputara
Anyị nyochaa Meizu Pro 6, ekwentị zuru oke nke ga-eju gị anya site na njedebe ya na ogo nke igwefoto ya.
Mmetụta mbụ nke LG X Cam
LG X Cam, ma e wezụga foto ya na igwefoto abụọ ahụ na azụ, egosiri dị ka ọnụ na-edozi nke ọma na ya niile.
Maka ọnwa a gam akporo 7.1 Onye nrụpụta ga - abata ụzọ mkpirisi, nkwado maka akara ngosi okirikiri na ndị ọzọ
N’ọnwa a gam akporo Developer Preview ga-adị maka Nexus na ngwaọrụ dakọtara. Anyị na-enyocha akụkọ.
Nyochaa UMI gbakwunyere oke UMI na ọnụahịa dị n'etiti
Taa, na nyocha UMI a, anyị na-enyocha oke UMI ọhụrụ dị elu nke na-abịa na ọnụahịa nke etiti gam akporo ma ọ bụ ọbụlagodi ala.
Anyị nwalere Xiaomi Redmi Rịba ama 3, nke kachasị dị nso n'etiti afọ
Anyị na-alaghachi na nyocha na nyocha vidiyo nke njedebe gam akporo si mba nke nnukwu mgbidi China, na nke a ...
Onye enyemaka Google bu ihe di nkpa nke Google Allo, ngwa ohuru ohuru nke choro iguzo site na ndi ozo maka ike ya na enyemaka
UMI MAX Nyocha
Taa, anyị na-ewetara gị Nyocha nke UMI MAX, onye nnọchi maka UMI SUPER na ọnụahịa karịrị karịa ịgbanwe na asọmpi ebe ha dị.
PanzerGlass, ihe nchebe ihuenyo maka ekwentị gị nke na-eguzogide hammering
Anyị na-egosi gị na vidiyo nguzogide nke ndị na-echebe ihuenyo PanzerGlass, ha na-eguzogide ịmị hama, mkpụ na ụdị ihe ọjọọ niile!
Moto Z, anyi nwalere flagship ohuru na IFA
Otu n'ime ihe ịtụnanya dị na IFA na Berlin bụ ngosipụta nke Moto Z, ekwentị ọhụụ nwere ike iju gị anya na nyocha vidiyo anyị.
Samsung Galaxy Note 7, anyị nwalere ya maka gị
Anyị nwalere Samsung Galaxy Note 7 na vidiyo na IFA, phablet ọhụrụ nke ndị na-emepụta Korea tinyere aka na esemokwu banyere mgbawa nke ụfọdụ batrị.
Sọpụrụ 8, anyị nwalere ya na IFA na Berlin
Ihe ngosi vidio izizi mgbe anwale Honor 8 na IFA 2016 na Berlin. Ekwentị dị ike na igwefoto abụọ nwere ọtụtụ ikike
UMi SUPER nyocha, ike na oke ego
Anyị nwalere UMi Super. Nnyocha nke ama ọnụ na ike dị egwu. Ihuenyo 5,5-anụ ọhịa, 4 GB nke RAM na 32 GB ROM.
Nyochaa Leagoo M5, ezigbo ngwanrọ gam akporo 6.0 maka naanị 60 Euro
Taa, anyị na-ewetara gị Nyochaa nke Leagoo M5, gam akporo Marshmallow nke nwere igwe, igwe nhazi dị mma, ihuenyo magburu onwe ya na akara mkpisiaka.
Brain Na Na Na! anyị nyochaa otu nke kasị mma puzzle egwuregwu n'ihi na gam akporo
Nyocha zuru oke nke Brain It On! otu n'ime egwuregwu kachasị mma maka gam akporo nke ga-eju gị anya site na ya
EA Sports UFC, anyị na-enyocha egwuregwu kachasị mma maka gam akporo
Nyocha vidiyo nke EA Sports UFC, otu n'ime egwuregwu kachasị mma maka ekwentị gam akporo ị nwere ike ibudata n'efu na Storelọ Ahịa Play.
LaLiga Fantasy Marca, anyị na-enyocha egwuregwu ahụ maka ndị hụrụ egwuregwu bọọlụ n'anya
Ihe egwu dị egwu bụ ọnụma niile. Na United States ha na-eke otu otu basketball na bọọlụ nke ha kemgbe afọ, ...
ACER Liquid Zest 4G Nyochaa
Lee ị nwere nyocha vidiyo zuru ezu nke ACER Liquid Zest 4G, ihe ọhụrụ ACER ntinye iji gboo mkpa nke ndị na-eto eto.
Nchịkọta nke ekweisi ntị dị na Sudio Vasa Blá, ihe karịrị ekweisi ejiji ngwa
Anyị na-enyocha ụda olu dị na Sudio Vasa Blá, ekweisi nwere ogo dị elu nwere njiri mara mma nke na-eme ka ọ bụrụ ngwa eji ejiji.
Day R vlanahụ, nyocha nke kacha mma lanarị maka gam akporo
Anyị na-enyocha vidio Day R vlanahụ, egwuregwu lanarị nwere ezigbo ihe mere na akụkọ pụrụ iche.
Moto G4 Plus, nyocha na echiche mgbe ọnwa ejirila
Nnyocha vidiyo nke Moto G4 Plus, ekwentị Motorola ọhụrụ nke pụtara maka ngwaike ya dị ike, na-egosipụta ihuenyo 5.5 "na ọnụ ahịa dị egwu: € 269
ZTE Axon Mini: nyocha na echiche
Nyocha vidiyo zuru ezu nke ZTE Axon Mini, ngwaọrụ nke ga-eju gị anya na ogo nke ihuenyo ya, ngwaike dị ike na igwefoto zuru oke.
Nyochaa nke igwefoto Thieye i60 Action, otu okike dị mma nke Go Pro Hero maka naanị 70 Euro
Taa, anyị na-ewetara gị Nyochaa nke Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe okwu Nkụkọ, Igwefoto ọnụahịa dị ọnụ ala na ndekọ vidiyo na 60K 4 nkebi ahịrịokwu kwa nkeji
TrackR Bravo, chefuo ihe ga-efunahụ gị
Anyị nwalere TrackR Bravo, onye na-eri ihe na-erughị euro 21 na nke ahụ ga-enye anyị ohere ịchọta ihe ọ bụla n'ime ụlọ ahụ maka ngwa gam akporo ya.
Nyochaa Cubot H2 GREAT gam akporo ọnụ maka naanị 140 Euro
Taa, anyị na-enyocha gị Cubot H2, ihe na-atọ ụtọ ma kwadoro Android Lollipop nwere nnukwu batrị, atụmatụ dị mma na ọnụahịa ka mma.
Ọ bụrụ na e nwere otu nnukwu mma nke Samsung Galaxy S7 ihu nwere, ọ bụ na ọ naghị ete ụkwụ ebe ọ bụla. Ọ bụ ekwentị zuru oke na ikekwe kacha mma Android
Gam akporo 7.0 Nougat Ikpeazụ Mmepụta Preview Ugbu a; ihe mmeghe na mbido ya
Nke a bụ nke ikpeazụ version maka mmepe nke gam akporo 7.0 Nougat na anyị nwere ike ịhụ na eze site na njedebe nke ọnwa na-abịa.
Nyochaa VR BOX 2.0, anyị nwalere iko kacha mma dị ala dị ala
Taa, anyị na-enyocha maka gị na VR BOX 2.0 nyochaa ihe nwere ike ịbụ ihe kacha mma kachasị mma maka ezigbo iko efu.
Nyocha zuru ezu na nyocha vidiyo na Spanish nke Moto G4, ekwentị ọhụrụ Motorola (Lenovo), nke na-eju anya na ihuenyo 5.5 "ya na arụmọrụ dị mma.
Viesgbọala na-enyere gị aka ịkwọ ụgbọala nke ọma ma chekwaa ego na mkpuchi ụgbọ ala gị
Drivies bụ ngwa n'efu maka gam akporo nke ga - enyere gị aka ịbụ ọkwọ ụgbọ ala ka mma mgbe ị na - echekwa ezigbo mgwakota agwa na mkpuchi ụgbọ ala.
Gam akporo N Mmepụta Preview 4 dị ugbu a
Ihe ngosi Android N Onye Mmepụta 4 dị ugbu a, nke gụnyere API maka imelite ngwa niile ma si otú ahụ mee ka ndị ọrụ nweta ya.
Moto X Force, nyocha na echiche mgbe ị jiri ya ọnwa atọ
Nyocha zuru ezu nke Moto X Force mgbe i jiri ya ọnwa atọ; otu n'ime igwe kachasị ike ma na-eguzogide ọgwụ na ahịa.
LG G5 bụ ama dị elu nke anyị na-enyocha n'ụzọ miri emi na nke pụtara maka usoro omume ọma dị ka igwefoto ya abụọ.
'Lab' bụ usoro nyocha obodo na-eme maka OnePlus 3
OnePlus na-achọ mmadụ iri atọ ga-anata OnePlus 30 ma mee nyocha nke ngwaahịa a iji gosi echiche ndị ọzọ.
RHA T20, nyocha na echiche: nnukwu ekweisi na-adịchaghị mma yana ogo dị mma iji kwekọọ na njedebe
Nyocha zuru ezu n'asụsụ Spanish nke ekweisi RHA T20, ekweisi ntị kacha mma na ahịa na-apụta maka mmecha ha na ụda dị elu.
ZTE Axon Elite, nyocha na echiche
Nyocha zuru ezu nke ZTE Axon Elite, ọhụụ ọhụrụ dị elu sitere na ZTE nke rutere Spain na-azọ ụkwụ iji nweta ọnọdụ na ahịa dị elu.
Nyochaa na Spanish nke Vernee Thor, ihe ijuanya nke oge maka etiti / ala dị ala gam akporo
Taa, anyị hapụrụ gị Nyocha na Spanish nke Vernee Thor ka ị wee hụ ihe niile gam akporo nwere ike ịnye gị na 100 Euro nke RRP.
Gam akporo N Mmepụta Preview 3 dị ugbu a
Google emechie isi okwu na mwepụta nke ụdị nke atọ nke nyocha onye nrụpụta ma ọ bụ gam akporo Onye Mmepụta Preview 3.
Huawei Mate 8, nyocha na echiche
Anyị na-ewetara gị nyocha zuru ezu nke Huawei Mate 8, nke nwere njirimara, atụmatụ na nnwere onwe nke na-eto ya na mpaghara ahụ.
You nwere ike ịnwe Mbadamba ụrọ gam akporo maka ihe na-erughị 100 euro?. Nyocha Teclast X10 3G
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha zuru oke nke Teclast X10 3G, otu gam akporo Lollipop na 3G Tablet n'okpuru 100 euro.
Zopo Agba S5.5, a na-akpali nnọọ phablet maka ihe na-erughị 160 euro
Nnyocha na Spanish nke ọhụrụ Zopo COlor S5.5, Zoble ọhụụ ọhụrụ nke pụtara maka uru ọ bara maka ego: ọ na-efu ihe na-erughị euro 160
Anyị nwalere UMI Touch nke ọma. Ezigbo ọnụ gam akporo maka naanị euro 140
Taa, anyị nwalere UMI Touch nke mere na, ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ otu, ị nwere ike ịhụ ya na arụ ọrụ n'ezie ma nwee echiche doro anya.
Anyị nwalere Leagoo Shark 1 nke ọma, ọnụ ya na batrị 6300 mAh
Anyị nwalere Leagoo Shark 1 nke ọma, ọnụ ahịa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China a ma ama, nke bara uru ịkọwa batrị 6300 mAh na-akpali akpali na PVP dị ịtụnanya.
Google na-ebuputa ihe nlele nke abuo nke gam akporo N nke ejiri edozi ihe di iche iche na uzo nke adighi agbanwe agbanwe na nke na-eme ka mmeghari ohuru
Leagoo Alpha 2, anyị nyochaa otu n'ime ndị dị ọnụ ala gam akporo igwe
Analysis na Spanish nke Leagoo Alfa 2, Leagoo ọhụrụ ntinye-larịị ekwentị na-anọchi ya aka panel na azụ
Nyocha Innos D6000, nnukwu ọnụ ya na batrị 6000 mAh
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke Innos D6000, nke dị n'etiti etiti ma nwee ihe karịrị atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị ...
Anyị nwalere ASUS Zenfone MAX, ọnụ ahịa ejiji na etiti gam akporo na ọnụahịa dị ala
Nyocha zuru ezu nke ASUS Zenfone MAX, ọnụ ahịa ejiji ga-abụ eze nke gam akporo n'etiti.
Anyị na-ewetara gị nyocha zuru ezu banyere Huawei Watch, smartwatch nke hapụrụ anyị ezigbo mmetụta maka ekele ya na arụmọrụ ya.
HOMTOM HT7 PRO, nyocha miri emi na Spanish
Anyị na-alaghachi na nyocha na nyocha miri emi nke njedebe nke Chinese site na nke a HOMTOM HT7 PRO, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, ụdị mma nke HOMTOM HT7 nke anyị nwereworị obi ụtọ nke nyochaa ebe a na Androidsis na nke kpatara anyị ezigbo mma sensations.
Nyocha vidiyo na nyocha nke Weimei We Plus, njedebe gam akporo nke sitere na Spanish nke ga - eme ka ị daa n'ịhụnanya kpamkpam
inyocha miri emi na nyocha nke ekweisi egwuregwu G18 egwuregwu Beatit, ekweisi ntị ntị na Bluetooth 4.1 na batrị lithium-ion
HTC One A9, ihe ngosi mbụ na MWC
Mmetụta izizi gosipụtara mgbe anwalechara HTC One A9, ekwentị nwere nnukwu ngwụcha yana atụmatụ dị elu na etiti elu
Sony Xperia XA, anyị nwalere ya na MWC
Anyị nwalere Sony Xperia XA, ọnụ ahịa dị n'etiti etiti yana ezigbo igwefoto na-erute ahịa na ọnụahịa nke euro 299
Nyocha na Spanish nke UMI Rome X, ihe ejiji ejiji maka euro 60
Nyocha na Spanish nke UMI Rome X nke ejiji na anyị nwere ike inweta naanị euro 60
Lenovo Vibe P1, nkọwapụta teknụzụ na mmetụ nke Lenovo nwere batrị 5000 mAh
ọzọ na Lenovo Guzosie iji gwa gị mmetụta mbụ anyị nwere gbasara kọntaktị mbụ a na Lenovo Vibe P1
Anyị nwalere Lenovo A7010, nnukwu njedebe gam akporo dị n'etiti
Site na Lenovo Stand anyị nwalere Lenovo A7010, nnukwu ọnụ na anyị nwere ike ịgụnye n'ime etiti gam akporo na ọnụ ahịa asọmpi.
Samsung Galaxy S7 Edge, nyocha vidiyo
Ihe ngosi vidio izizi mgbe ọ nwesịrị Samsung Galaxy S7 Edge, ọhụụ ọhụrụ nke Samsung nke pụtara maka akụkụ akụkụ akụkụ abụọ ya.
Nkpọtụrụ mbụ na LG G5 na MWC16, nkọwapụta teknụzụ na ọnụahịa
Site na MWC16 na Barcelona anyị hapụrụ gị vidiyo a na kọntaktị mbụ na LG G5.
Nyocha miri emi nke Doogee Y200
Nyocha na nyocha miri emi nke Doogee Y200. Eziokwu na eziokwu niile n'egbughị oge ma ọ bụ wepụ okwu.
Samsung Gear S2, nyocha: Samsung kụrụ akara ahụ na smartwatch ọhụrụ okirikiri
Anyị na-eme nyocha zuru ezu nke Samsung Gear S2, nke mbụ smartwatch nwere eriri okirikiri na bezel na-agbagharị site na Samsung nke pụtara maka iji Tizen
Igodo Logitech-to-go, kiiboodu ikuku iji kuru gị ebe ọ bụla
Otu n'ime nhọrọ ndị kachasị amasị iji wepụta uru nke mbadamba ụrọ bụ itinye akwụkwọ ahụigodo. NA…
Nyochaa n'asụsụ Spanish nke Cubot S600, gam akporo dị ọcha maka ihe na-erughị 150 Euro na iji ihe mmetụta mkpịsị aka
Anyị na-aga n'ihu na nyocha vidiyo nke njedebe nke mbido China, na nke a yana nyocha zuru ezu na nyocha vidiyo ...
Sọpụrụ 7, anyị na-enyocha ekwentị kachasị mma - dị elu maka ihe na-erughị 400 euro
Anyị na-ewetara gị nyocha zuru oke nke Honor 7, Honor ọhụụ ọhụrụ nke na-apụta maka ogo ya zuru oke na ngwaike dị ike
Nyochaa n'asụsụ Spanish nke Teclast X16 Pro mbadamba PC, UltraPC DualBoot na asọmpi asọmpi
Taa na nyocha a na Spanish nke Tablet Teclast X16 Pro anyị na-enyocha ọnụ na-enye anyị maka ọnụahịa dị ịtụnanya iji nweta ụwa abụọ kachasị mma dịka Android 5.1 Lollipop na Windows 10.
Nyochaa n'asụsụ Spanish nke HOMTOM HT7, 5,5 »na gam akporo Lollipop naanị maka 55 Euro
Ọ bụrụ n’echiche na Smartphone 5,5 “Android Lollipop naanị maka 55 Euros ga-abụ nke adịghị mma, ị maghị HOMTOM HT7
Nyochaa na Spanish nke Bluboo Uwatch, ihe elekere bluetooth mara mma maka naanị Euro iri abụọ na asaa
Taa, anyị na-enyocha Bluboo Uwatch n'ụzọ zuru ezu, njiri mara nke bluetooth nke anyị nwere ike inweta maka ihe na-erughị 30 Euro.
Nyocha vidiyo na Spanish nke Moto X Style, Motorola dị elu nke bara uru na ọla edo ya
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha vidiyo a sara mbara na Spanish nke Moto X Style nke anyị gosipụtara gị na vidiyo nke ihe karịrị nkeji 26 n'ogologo, ihe niile kachasị Motorola ọnụ na-enye anyị.
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha zuru oke nke ihe doro anya bụ otu n'ime njedebe kachasị mma nke gam akporo, ụdị Oneplus X seramiiki.
Haier Iron Bluetooth, ezi bluetooth Smartwatch nke karịrị naanị euro 40
Taa, anyị na-eweta Haier Iron Bluetooth, Bluetooth Smartwatch dị ọnụ ọnụ yana ihe mmetụta ngwa ngwa nwere ọnụ.
UE Ọganihu 2, anyị nwalere ikuku ikuku kachasị mma na ahịa
Mmetụta izizi mgbe anwalechara igwe okwu UE Boom 2, ọgbọ ọhụrụ nke igwe okwu UE nke na-apụta maka iguzogide ájá na mmiri.
Onda V919 AIR DualOS, anyị na-enyocha mbadamba DualOS dị ike na ọnụ ọchị
Taa, anyị na-ewetara, nyochaa ma kwado mbadamba Onda V919 AIR DualOS, mbadamba ihe na-atọ ụtọ na ọnụego a na-apụghị ịta ụta.
Elephone M2, nyocha na ahụmịhe onye ọrụ
Taa, anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Elephone M2, ọnụ ọgụgụ dị n'etiti etiti etiti kachasị adịchaghị adị ugbu a.
Bluboo XTouch, nyocha na nyocha na Spanish
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha na Spanish nke Bluboo XTouch, nke na-akpali akpali ngwanrọ gam akporo 5.1 nwere nkọwapụta teknụzụ na ogo nke ọ bụla dị elu gam akporo
Xiaomi Igwe ekwe ntị, ekweisi adịgboroja maka ihe na-erughị euro 20
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha na Spanish maka igwe ekwe ntị ntị ọhụrụ nke Xiaomi, ekweisi adịchaghị na teknụzụ ngwakọ ngwakọ maka ihe na-erughị 20 Euro.
RHA T10, nyocha nke otu n'ime ekwe ntị kacha mma na ahịa
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha zuru oke nke ekweisi RHA T10, ekweisi ntị ọhụrụ nke RHA nwere uru dị mma maka ego
Nyochaa na Spanish nke HOMTOM HT6, ọnụ ya nwere ikike batrị kachasị elu na ahịa
Taa, anyị na-ewetara nyocha a zuru oke na Spanish nke HOMTOM HT6, gam akporo ekwentị nwere batrị kachasị na ahịa dị ugbu a.
Anyị nwalere Xiaomi Mi Band 1s nke ọma
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha a zuru oke na Spanish ebe anyị na-akọwa ihe niile na ihe niile gbasara Xiaomi Mi Band 1s
Ee, nsogbu Wi-Fi nke ZUK Z1 dị !!. Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ihe akaebe
Taa, site na ngagharị iwe, anyị na-egosi gị nsogbu Wi-Fi niile nke ZUK Z1, nsogbu ndị, ka ọ dị ugbu a, edozighị ya ọbụlagodi mmelite ikpeazụ wepụtara na November 11.
Nyocha na nyocha nke ZUK Z1
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha zuru oke nke ụdị mba ZUK Z1.
Anyị na-enyocha ekwentị maka ndị kacha ochie n'ụlọ: Haier E-ZY Smartphone A6
Ndị okenye nke ụlọ ma ọ bụ ezinụlọ bụ ihe ga-enwe ike inweta ọtụtụ n'ime E-ZY smartphone A6 site na Haier nke anyị nyochara.
Nyocha nke Doogee F5, ihe ịtụnanya gam akporo Phablet na ọnụego laughable
Na nyocha a, anyị na-egosi gị ihe niile Doogee F5 na-enye anyị, ihe ịtụnanya gam akporo Phablet na ọnụ ọchị.
UMI Emax Mini analysis, nyocha na Spanish
Taa, anyị na-enyocha UMI EMax Mini, ihe gam akporo Lollipop nwere nkọwa nke etiti gam akporo maka naanị euro 130
Anyị nwalere igwefoto magburu onwe ya nke Nexus 5X
Anyị nwere Nexus 5X n'aka anyị iji lelee ogo nke oghere ya dị oke ọnụ na otu sọftụwia si eme n'otu oge.
Xiaomi Mi4c, nyocha na Spanish
Taa, anyị na-enyocha nyocha ọhụrụ Xiaomi nke dị n'egbugbere ọnụ onye ọ bụla. Ọnụ ya abụghị onye ọzọ karịa Xiaomi Mi4c, ọnụahịa gam akporo dị egwu na ọnụahịa a na-apụghị ịkatọ.
Esi gbanwee ogwe ngosi gam akporo maka smart
Taa, anyị na-akụziri gị ịgbanwe ngosi mmanya nke gị android maka a ọzọ nwere ọgụgụ isi na ọtọ otu.
INNJOO ONE 4G Nyocha na nyocha
Taa, anyị ga - ahapụrụ gị nyocha na nyocha zuru ezu nke INNJOO ONE 4G, nke na - apụ apụ maka ihe dị egwu ma dị mma.
Xiaomi Redmi Note2 Nyochaa. Xiaomi emeela ya ọzọ, nnukwu ọnụahịa nke na-erughị euro 200
Na nyocha a zuru ezu na nyocha vidiyo nke Xiaomi Redmi Note2 anyị na-egosi gị otu ọ ga-esi kwe omume iyi nnukwu ọnụ maka naanị euro 150.
Ihe niile nke Tablet Teclast X10 HD 3G na-enye anyị, DualBoot dum maka ihe karịrị euro 200
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha na nyocha zuru ezu nke Teclast X10 HD 3G Tablet na DualBoot Windows 8.1 na gam akporo 4.4.4 buut system iji nwee ọmarịcha ụwa abụọ.
Nyocha na nyocha nke Leagoo Elite 1, nnukwu ọnụ na ọnụego laughable
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha na nyocha zuru ezu nke Leagoo Elite 1, ọnụ na naanị 160 Euro na-enye anyị nkọwapụta nkọwapụta nke gam akporo dị elu.
Nyochaa Hisense King Kong G610
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha na nyocha nke Hisense King Kong G610, ọhụụ ọhụrụ nke android bidoro n'otu ọnwa nke ọnwa Julaị 2015 yana anyị nwere ike ịzụta na ekwentị ekwentị.
Lenovo Vibe S1, ekwentị emere maka ndị hụrụ onwe ha n’anya
Anyị nwalere Lenovo Vibe S1, ekwentị ọhụrụ nke Lenovo nwere igwefoto ihu abụọ iji were onwe gị kachasị mma
Siswoo i8 Phanter, anyị nwalere ekwentị Siswoo ọhụrụ
Anyị na-enyocha vidiyo nke Siswoo i8 Panther, ekwentị Siswoo ọhụrụ nke pụtara ìhè maka ogo nke njedebe na ọnụ ọnwụnwa ya: 199 euro
R9 Darkmoon, nke a bụ ekwentị Siswoo ọhụrụ nwere ihu abụọ
Anyị na-enyocha ihe nzuzo niile nke Siswoo R9 Darkmoon, ekwentị ọhụụ ọhụụ ga-eso YotaPhone 2 asọmpi.
Samsung Gear S2, smartwatch kacha mma na ahịa?
Mmetụta mbụ na vidiyo mgbe ị nwara Samsung Gear S2, smartwatch nke pụtara maka imepụta ya na eziokwu nke iji Tizen.
Anyị na-enyocha vidiyo na Sandisk Ikuku Njikọ, obere USB sitere na Sandisk nke ga-ekwe ka nkwanye na ngwaọrụ atọ n'otu oge.
LG G pad II 10.1, nke mbụ gosipụtara mgbe ọ nyochachara mbadamba LG ọhụrụ
Nyocha vidiyo zuru ezu nke LG G Pad II 10.1, mbadamba nkume ọhụrụ LG nke na-apụ apụ maka njedebe na ọnụego edozi: ọ ga-efu ihe na-erughị euro 600
ZTE Axon Elite, mmetụta mbụ na vidiyo
Anyị na-enyocha ZTE Axon Elite na vidiyo, na-egosi gị ihe nzuzo niile nke ọhụụ ọhụrụ ZTE.
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Moto X Play
Nyochaa na nyocha nke Moto X Play ọhụrụ ebe anyị na-egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere ọdụ Motorola ọhụrụ a
Alcatel OneTouch Xess, anyị nwalere mbadamba 17 nke Alcatel
Anyị nwalere Alcatel OneTouch Xess, mbadamba ihe dị ọhụrụ 17 nke ga-apụta maka arụmọrụ ya na imepụta ya.
Ricoh Theta S, nke a bụ igwefoto Ricoh 360 ọhụrụ
Ricoh Theta S bụ ngwaọrụ dị egwu nke anyị nwere ike iji mee vidiyo vidiyo 360 ma zipụ ha na ekwentị
Anyị na-enyocha vidiyo Lenovo Yoga Tab 3 Pro mbadamba nkume nke na-apụ apụ maka pico projector na mma mechara.
Alcatel OneTouch GO Play, nyocha vidiyo nke ekwentị ọhụrụ Alcatel
Anyị enweela ohere ịnwale Alcatel OneTouch GO Play na ndị a bụ echiche mbụ anyị
Lenovo Vibe P1, anyị nwalere flagship Lenovo ọhụrụ
Anyị na-enyocha vidiyo nke Lenovo Vibe P1, ekwentị Lenovo ọhụrụ nke pụtara maka batrị 5.000 mAh ya na ọmarịcha mma.
Samsung Galaxy Rịba ama 5, anyị nyochaa ya na vidiyo
Anyị na-enyocha vidiyo nke Samsung Galaxy Note 5, onye ọhụrụ so na Samsung's Note nso iji merie iPhone 6s na iPhone 6s Plus.
Samsung Galaxy S6 ihu + na iPhone 6s Plus, onye ga-ebili n’ocheeze nke ahịa phablet?
Anyị na-eme ntụnyere zuru oke n'etiti Samsung Galaxy S6 ihu + na iPhone 6s Plus, titan abụọ dị njikere ịlụ ọgụ ịrịgo n'ocheeze ahụ,
Sony Xperia Z5 kọmpat, na-anwale esote iPhone 6s na-esote
Anyị nyochaa na Sony Xperia Z5 Compact, ekwentị ọhụrụ nke Sony chọrọ ịsọmpi na Apple na iPhone 6s ya.
Moto 360, ndị a bụ echiche anyị mgbe anyị lechara ya na IFA 2015
Anyị na-enyocha vidiyo ọhụrụ Moto 360, ụdị nke kachasị mma nke ụdị mbụ na nke ahụ na-aga n'ihu ịkụ nzọ na gam akporo Wear dị ka sistemụ arụmọrụ ya.
Acer Predator 8, anyị nwalere mbadamba egwuregwu Acer
Anyị na-enyocha vidiyo Acer Predator 8, mbadamba nkume ọhụrụ nke Acer maka ndị na-ege ntị gamer na nke ahụ ga-atọ ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu ụtọ
LG Rolly kiiboodu, anyị nwalere LG's wireless na mpịakọta-elu keyboard
Anyị nwalere LG Rolly, LG ọhụụ ọhụụ ọhụrụ na-enye nnwere onwe dị egwu. You ga-atụ uche ya?
Huawei Mate S, ihe ngosi mbụ na vidiyo
Anyị na-ewetara gị nyocha vidiyo nke Huawei Mate S, ọhụụ ọhụrụ nke Huawei na ọkwa phablet. Ọ ga - enwe ike iji Galaxy Note 5 ma ọ bụ Edge +?
Etu esi eji mkpọchi mkpisi aka na gam akporo ọ bụla ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe mmetụta mkpịsị aka
Ngwa iji mkpọchi mkpisiaka na gam akporo ọ bụla
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha na nyocha zuru ezu na Spanish nke Oneplus 2, otu n'ime ihe atụ gam akporo gam akporo nke afọ.
Nyochaa Iradish X9 Y6, Apple Watch Clone Bluetooth Smartwatch nke anyị nwere ike inweta maka erughị euro 30
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha na Spanish nke Iradish X9 Y6, ezigbo oyiri nke Apple Watch na anyị nwere ike inweta ihe na-erughị 30 Euro
Taa, anyị na-ewetara gị ntụnyere na ule ọsọ ọsọ nke Androidsis n'etiti Doogee Valencia Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X
Honor 7, mmetụta mbụ mgbe e gosipụtara ya na London
E gosipụtawo Honor 7. Anyi na ewetara gi ihe mbu anyi mgbe anyi lere isi ohuru ohuru. You ga-atụ uche ya?
Nyochaa Doogee Nova Y 100X, Quad Core Lollipop maka ihe na-erughị 80 Euro
Nyocha na nyocha zuru ezu Doogee Nova Y 100X, ihe nkedo gam akporo nke nwere ike inweta maka ihe na-erughị 80 Euro.
Samsung Galaxy S6 Edge, nke a bụ ahụmịhe m mgbe ọnwa ejirila
Anyị na-anwale Samsung Galaxy S6 Edge maka otu ọnwa ma ndị a bụ nkwubi okwu anyị
Gam akporo M Mmepụta Preview 3 maka Nexus ngwaọrụ
Nexus ngwaọrụ nwere ike ịnweta gam akporo M Onye Mmepụta Preview 3 download: Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 na Nexus Player
Ukpono 6 Plus, a elu-ọgwụgwụ phablet maka ihe na-erughị 400 euro
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha zuru oke nke Honor 6 Plus, ọhụụ ọhụrụ dị elu nke Honor na-ezube iwepịa ahịa maka ọnụahịa ya siri ike: € 399
Nkọwa n'etiti Moto G3 VS Doogee Valencia 2 na 100 Pro
Anyị na-eche ihu Moto G3 VS Doogee Valencia 2 na 100 Pro maka ọchịchị nke ala dị n'etiti etiti gam akporo. Nye ga-emeri n’agha ahụ?
Moto G 2015 Review: afọ a nnukwu ndakpọ olileanya
Na nke a Moto G 2015 Review anyị na-akụziri gị tupu onye ọ bụla ọzọ ihe ọhụrụ Motorola ọhụrụ a na-enye anyị.
Cube I7 Remix OS: Ihe ndị a bụ echiche m mgbe izu abụọ gachara iji Tablet mee ihe
Mgbe m nyochachara Mbadamba ụrọ Cube I7 Remix OS ndị a bụ ezigbo echiche m.
Nyochaa nke Doogee Valencia 2 na 100 Pro. Ihe nzuzo nzuzo nke Doogee maka gam akporo ala
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha na nyocha vidiyo nke ọhụrụ Doogee Valencia 2 Y 100 Pro, ọnụ nke na-achị achị na mpaghara dị ala n'etiti gam akporo.
Nyochaa na Spanish nke Yi Action Camera si Xiaomi, GoPro Hero 3 maka ihe na-erughị 100 Euro
Taa, anyị na-ewetara gị Nyocha na nyocha nke Xiaomi Yi Action Camera, igwefoto emereme ma ọ bụ igwefoto egwuregwu na nkọwapụta teknụzụ dịka GoPro Hero 3 nke anyị nwere ike inweta maka erughị 100 Euro.
Cube I7 CX RemixOS mbadamba nyocha. Mbadamba gam akporo tinyere keyboard na-efu gị ihe na-erughị 200 Euro
Taa, anyị na-ewetara nyocha na nyocha nke mbadamba Cube I7 CX RemixOs na gam akporo 4.4.4 Kit Kat na keyboard Cube CDK01, setịpụrụ iche maka ihe na-erughị 200 Euro.
Nyocha Ulefone Be Touch 2, otu Octa Core na 3Gb nke RAM maka ihe na-erughị 170 Euro
Taa, anyị na-ewetara gị Nyocha na nyocha zuru ezu nke Ulefone Be Touch 2, ngwụcha ngwanrọ gam akporo nwere njiri mara njedebe na ọnụahịa gam akporo ọnụ ala.
Nyocha nke Samsung Galaxy S6 ihu, smartphone nke mgbanwe maka onye na-emepụta Korea
Anyị na-eme nyocha nke Samsung Galaxy S6 ihu, smartphone kachasị ike na nke ahụ pụtara ngbanwe na mbipụta ndị gara aga nke usoro S.
Doogee F3: nkọwa na atụmatụ
You chọrọ ịchọpụta ihe ọhụrụ Doogee F3?. Taa, anyị na-ewetara gị nkọwa niile, nnweta na mwepụta ego nke ọhụụ Doogee ọhụrụ a
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke Lenovo K3 Note, dum 64-bit Octa Core, 2 Gb nke RAM na ihuenyo IPS FullHD nke anyị nwere ike ịzụta naanị 135 Euro.
Android M Onye Mmepụta Preview 2 amalitela site na Google nke ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ anyị gwara gị n'ụzọ zuru ezu.
Ọnwụnwa gam akporo Androidsis: LG G2 VS LG G4
Taa anyị na-eche LG G2 VS LG G4 ihu na nyocha ọsọ ọsọ nke Androidsis. Onye ga-emeri duel fratricidal?
Ọnwụnwa gam akporo Androidsis: Taa LG G3 VS LG G4
Nnwale ọsọ nke anyị na-eche ihu LG G3 VS LG G4
Anyị nwalere LG G4 nke ọma, ọnụ ya nwere atụmatụ kacha mma na ahịa dị ugbu a
Taa na nyocha a, anyị na-enyocha LG G4 nke ọma iji nye gị ezigbo echiche anyị maka ihe maka mụ onwe m bụ ngwụcha ngwanrọ kachasị mma nke oge a, ma na imepụta na nkọwapụta teknụzụ yana arụmọrụ agbakwunyere.
Anyị na-ewetara gị nyocha nke Huawei P8 Lite, ọla ọhụrụ nke Huawei nke ọ na-ezube ịchịkwa ahịa dị n'etiti. Ọ ga-aga nke ọma?
Anyị nwalere ekweisi ekwe ntị nke Olixar X2 Pro, ekweisi dị mma maka naanị 35,99 Euro
Taa achọrọ m ịkwado gị ụfọdụ ekweisi na-akpali akpali na Bluetooth 4.0 na NFC maka ihe na-erughị 36 Euro. Aha gị na ihe nlereanya Olixar X2 Pro na anyị nwere ha dị site na MobileFun.es
Anyị na-eme nyocha nke Honor 4X, ebe anyị na-egosi ihe nzuzo niile nke ọhụrụ Honor phablet, ọnụ na-enweghị ọnụ ahịa ego
RHA MA750i, na-eme ka ịdị mma na imebe ihe dị na ekweisi
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke ekweisi RHA MA750i, yana ezigbo mma na ogo dị mma nke na-eto ya na ọkwa ya.
FC30 Pro, anyị nyochaa ọhụụ ọhụrụ maka ndị hụrụ retro n'anya
Anyị na-enyocha onye njikwa FC30 Pro, ezigbo ngwaọrụ maka ndị hụrụ retro n'anya na nke a ga - enyere ha aka ịtụte ebube ochie nke egwuregwu vidio.
Na nyocha Xiaomi Mi4 a, anyị na-egosi gị ike na adịghị ike niile nke ihe m bụ otu n'ime nhọrọ ịzụ ahịa kachasị mma na nke kachasị mma maka ọnụahịa gam akporo ọhụrụ.
Ihe niile gam akporo Wear 5.1.1 na-enye anyị.
Taa, na-erite uru nke mmelite nke LG G Watch na Android Wear 5.1.1, m na-ewetara gị vidiyo nke m na-egosi gị ozi niile nke ụdị ọhụrụ a nke gam akporo Wear.
Onye ọkachamara na-arụ ọrụ bụ ihe nchọgharị faịlụ ọhụrụ nke nwere ihe eji emepụta ihe dị iche iche nke anyị nwere ike ịnwaleworị maka ekele beta.
Appstụnanya ngwa ọdịnala: Taa, Mooverang ịchịkwa akaụntụ akụ gị niile
Taa, anyị na-akwado Mooverang, ngwa dị mfe ma dịkwa egwu nke ga - enyere gị aka ijikwa akaụntụ akụ gị niile site na otu ngwa.
Ngosipụta gam akporo M dị ugbu a maka Nexus 5, 6 na 9
Gam akporo M Preview dị maka Nexus 5, 6 na 9 ngwaọrụ malite taa dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe oyiyi.
Yaap Money, ngwa ịkwụ ụgwọ ekwentị nke na-ewu ewu
Taa, mgbe ọnwa asatọ nke Yaap Money dịrị, anyị na-enyocha ọnụ ọgụgụ nke ngwa ahụ yana ịgwa gị isi akụkọ a na-atụ anya maka afọ a.
Ngwa ngwa Android dị egwu: ParkRadar Taa
AparcaRadar bụ ngwa n'efu maka gam akporo nke ga-enye anyị ohere, dị ka ngwa mmekọrịta n'etiti ndị ọrụ, ịchọta ma kọọ obere oghere na-adọba ụgbọala n'efu na-adịkarị na nnukwu obodo na Spain.
WhatsApp na ozi: Whonye ga-emeri na olu oku olu?
Na Androidsis anyị na-eche ihu nke duel nke ngwa ma ọ bụ duel nke olu na-akpọ WhatsApp na Messenger. Nye ka i chere ga-emeri n’agha ahụ?
Microsoft Office Preview nwere nkwado maka mbadamba ihe owuwu Intel x86.
Nkwanye ùgwù 3C, ihe ndị a bụ mmetụta anyị
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke Honor 3C, Honor dị n'etiti na-erughị euro 150 yana nwere oke atụmatụ zuru oke maka onye ọrụ ọ bụla.
Nyochaa Doogee Ibiza F2, QuadCore 64-bit maka naanị $ 129,99
N'ebe a, anyị hapụrụ gị nyocha zuru ezu nke Doogee Ibiza F2, njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China nwere ihe nhazi 64-bit QuadCore na naanị 125 euro nke RRP.
Nyochaa Kingszone Z1, 64-bit OctaCore maka naanị $ 179,99
Taa, anyị na-ewetara Review nke Kingszone Z1, dum 64-bit octa isi na GB abụọ nke RAM maka naanị $ 179,99.
Nyochaa LG G Pad 10.1, mbadamba 10 dum nke ihe na-erughị 200 euro
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke LG G Pad 10.1, gam akporo Tablet dị egwu na 10 "ihuenyo na mkpebi HD nke anyị nwere ike ịnweta naanị 189 euro.
Nyochaa Moto G 4G
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke Moto G 4G ka ị wee hụ n'ọrụ na ihe niile ụdị ọhụrụ a nke Moto G 2014 yana njikọta LTE na-enye anyị.
Marina Music Player, ọzọ dị mma music player kpam kpam free na ọtụtụ functionalities
Nke a bụ echiche m banyere nnukwu egwu egwu egwu maka gam akporo akpọrọ Marina Music Player.
Nyochaa Wiko Higway Pure, nke kachasị njọ na ahịa
Ntụleghachi na nyocha mbụ nke Wiko Higway Pure, nke kachasị njọ na ụwa.
Ngwa kachasị atọ m nwere maka ịkpọ oku n'thentanet
Taa, ana m ekwupụta ngwa ngwa m kachasị mma iji mee oku olu anaghị akwụ ụgwọ na netwọkụ.
Nsogbu nke Zombies II, egwuregwu zombie na ụdị nsogbu nke Clans
Nsogbu nke zombies II na-ewetara anyị egwuregwu na ụdị egwuregwu nke Nsogbu nke Clans, ọ bụ ezie na ọ na-elekwasị anya na ndị na-egwu Zombie.
Nyochaa Alcatel OneTouch Idol 3 nke 5'5 ″ ihuenyo
Lee, anyị ga-ahapụrụ gị nyocha na nyocha izizi nke Alcatel OneTouch Idol 3 nke 5'5 "nke e gosipụtara na MWC15 na Barcelona.
Tụnyere Apple Watch VS Moto 360
Ntụle mbụ n'etiti Apple Watch VS Moto 360
Apple Watch: nyocha nke elekere apụl
Nyochaa nke Apple Watch, elekere Apple nke enyerela na Machị 10 n’ụwa niile. Chọpụta nkọwa niile na atụmatụ elekere a
Nyochaa Alcatel OneTouch Idol 3, ihe dị n'etiti gam akporo nke kacha mma na njirimara
Taa, anyị na-ewetara gị Nyocha na nyocha nke ihuenyo Alcatel OneTouch Idol 3 nke 4,7, ọnụ ya nwere nkọwapụta teknụzụ dị ka Moto E yana igwefoto ndị ikpeazụ furu efu.
Nyochaa Lenovo Tab2 A10-70 a 10 ″ Mbadamba ụrọ maka naanị 199 Euro
N'ebe a, anyị hapụrụ gị mmetụta mbụ anyị mgbe nyochachara nke mbụ nke Lenovo Tab2 A10-70, otu gam akporo Lollipop Tablet na Quad Core 64-Bit processor na 2 Gb nke Ram maka naanị 199 euro.
Nyochaa Lenovo Tab2 A8 niile gam akporo Lollipop Phablet maka 99 Euro
Anyị na-egosi gị na vidiyo na Lenovo Tab2 A8, otu Phablet na gam akporo Lollipop, Mediatek quad-core processor na 8 "IPS ihuenyo nwere mkpebi HD maka naanị 99 euro.
Asus ZenFone 2 nyochaa site na # MWC15
Anyị na-ahapụ gị na Asus ZenFone 2 Analysis na mmetụta mbụ anyị banyere ihe ọma na ihe ọjọọ nke ọhụụ gam akporo ọhụrụ a.
Lenovo Tab2 A7 / 30 a Lenovo Phablet nke e gosipụtara na MWC15 maka naanị 79 Euro
Anyị na-egosi gị site na MWC 2015, Lenovo Phablet na-akpali akpali, Lenovo Tab2 A7 / 30, nke ga-aga ire ere na Spain maka naanị 79 euro.
Alcatel One Touch Watch, Wareable Alcatel na-enweghị Android Wear maka euro 129
Anyị na-egosi gị nzọ dị egwu nke Alcatel n'ihe banyere Smartwatches na Alcatel One Touch Watch a, elekere na-enweghị Android Wear maka euro 129.
ZTE Blade S6 Plus, anyị nwalere ọhụụ ọhụrụ nke onye nrụpụta Asia
Anyị nwalere ZTE Blade S2015 Plus na MWC 6, nke dị n'etiti etiti na-ekwesịghị ịgafe euro 350. O zuru ezu na 8GB nke ebe nchekwa dị n'ime?
Mmetụta mbụ mgbe nwalere Honor 4X ahụ, etiti dị n'etiti na igwefoto 13-megapixel na ndụ batrị 72.
N'ebe a, anyị hapụrụ gị Nyocha zuru ezu nke Lenovo S60, ọnụahịa nke nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa ma ọ bụ obere dị ka Moto E 2015 ọhụrụ n'agbanyeghị na nwere njirimara ka mma dị ka igwefoto arụmọrụ ya.
Anyị nwalere na vidiyo ọhụrụ Touchwiz nke Samsung Galaxy S6
Anyị na-egosi gị na vidiyo ka ụdị ọhụụ ọhụụ nke ọhụrụ Touchwiz interface nke Samsung Galaxy S6 si akpali ma meghachi omume.
Anyị na-egosi gị LG Spirit na vidiyo site na LG satnd na MWC 2015 na Barcelona.
Anyị na-enyocha Honor 6, onye ọhụụ ọhụrụ nke Huawei nke Europe na atụmatụ dị egwu na ọnụahịa na-agba agba
Honor 6 gbakwunyere, nhazi magburu onwe ya na otu igwe foto kachasị mma na ahịa
Anyị na-enyocha Honor 6 Plus, ọkọlọtọ nke ugbu a nke Huawei ọhụrụ maka akara ahịa Europe na nke pụtara maka igwefoto ya dị ike.
ZTE Spro 2, anyị nwalere ihe ndị na-adọrọ mmasị obere gam akporo projector
Anyị na-ewetara gị nyocha nke ZTE Spro 2, obere ihe ngosi gam akporo nke onye nrụpụta Asia nke nwere nnukwu nnabata na MWC 2015
Anyị na-egosi gị LG Watch Urban smartest nche nke oge «na-enweghị gam akporo Wear»
Anyị na-egosi gị na vidiyo ọhụrụ LG Watch Urban, LG smartwatch nke na-esi na gam akporo Wear wee pụọ na WebOS.
Samsung Gear VR Innovator Edition, nke mbụ
Nnyocha nke Samsung Gear VR Innovator Edition, ngwa nke, yana Samsung Galaxy S6 / S6 Edge, na-eme ka anyị banye n'eziokwu dị adị.
MWC 2015: Lenovo Vibe gbara Lenovo Smartphone Camera
Site na MWC15 anyị na-egosi gị na vidiyo Lenovo Vibe Shot, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, igwefoto riri smartphone na sistemụ arụmọrụ Android 5.0.2 Lollipop.